१८ वर्षमै विवाह गर्छन् ५२ प्रतिशत महिला |
१८ वर्षमै विवाह गर्छन् ५२ प्रतिशत महिला
प्रकाशित मिति :2018-04-13 11:25:13
ललितपुर । नेपालको कानूनले २० वर्ष अघि भएको विवाहलाई वैधानिकता दिँदैन । काननून अनुसार विवाहको लागि महिला पुरुष दुबैको उमेर २० वर्ष भएको हुनुपर्छ । तर, नेपालमा आधा बढि अर्थात् ५२ प्रतिशत महिलाको विवाह १८ वर्षमा हुने गरेको पाइएको छ ।
स्रोत : नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०१६
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा आधा बढि महिलाको विवाह १८ वर्षको उमेरमा हुने गरेको पाइएको हो ।
अध्ययनमा भनिएको छ, ‘आधाबढि महिलाले १८ वर्षमा विवाह गर्छन् । जबकी ५ पुरुषमा १ अर्थात् १९ प्रतिशतले मात्रै १८ वर्षमा विवाह गर्छन् ।’
प्रतिवेदन अनुसार शिक्षा हासिल गरेको तुलनामा शिक्षा हासिल नगरेका महिलाको विवाहको उमेर ४.६ वर्ष अगाडि छ । जस अनुसार एसएलसी भन्दा कम पढेका महिलाहरुको विवाहको औषत उमेर १६.८ प्रतिशत छ भने एसएलसी माथि पढेका महिलाहरुको विवाह २१.४ वर्षमा हुने गरेको छ ।
अध्ययनमा प्रतिवेदन अनुसार नै यौन सम्पर्क भने महिलाले विवाह पछि र पुरुषले विवाह अगाडि नै गर्ने गरेका पाइएको छ । नेपालमा महिलाहरु विवाह भएकै उमेरमा यौन सम्पर्क शुरु गर्छन् भने पुरुषहरु विवाह गर्ने उमेर भन्दा १.२ बर्ष अघि देखिनै यौन सम्र्पक शुरु गर्ने गरेको पाईएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ, ‘एस.एल.सी. वा सो भन्दा बढी शिक्षा हासिल गरेका महिलाहरु शिक्षा हासिल नगरेका महिलाहरु भन्दा ४.५ बर्ष पछि मात्र यौन सम्पर्क शुरुवात गर्ने गरेको पाइएको छ ।’
अध्ययन अनुसार एस.एल.सी. वा सो भन्दा बढी पढ्नेले २१.४ वर्षमा र शिक्षा नपाएका १६.९ वर्षमा) यौन सम्पर्क गर्छन् भने ५१ प्रतिशत महिलाहरु १८ बर्ष अगाडि नै यौन सम्पर्क गर्ने गरेको पाईएको छ ।